डोटी अस्पतालमा आयो डिजिटल एक्सरे मेसिन « News of Nepal
विमल विष्ट, डोटी । जिल्ला अस्पताल डोटीमा डिजिटल एक्सरेमेसिन आएको छ । अस्पतालमा भएको सादा एक्सरे मेसिन पनि बिग्रीएको र बिरामीलाइ एक्सरे सेवा लिन कठिन भैरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लाखौ मुल्य पर्ने उक्त डिजिटल एक्सरेमेसिन डोटी अस्पतालमा पठाएको हो । उक्त डिजिटल एक्सरे मेसिनका सम्पुर्ण सरसामान तथा पाटपुर्जाहरु आई सकेको जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट डा.भुषण मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल एक्सरे मेसिनका सम्पुर्ण सरसामान भाईसकेको छ,प्राबिधिकले फिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो सेवा सुरु हुने छ ।” डोटीमा डिजिटल एक्सरेमेसिन पहिलो पटक आएको हो ।
जिल्ला अस्पतालमा यस भन्दा अघी एक्सरे मेसिन बिग्रीएका कारण स्थानियहरु सामान्य टुट फुट भएको एक्सरे गर्न दिपायल तथा जिल्ला बाहिर गएर महंगो पैसा खर्च गरेर सेवा लिन बाध्य भएका थिए । अस्पतालमा डिजिटल एकसरे मेसिन आएपछि अहिले स्थानियहरु निकै खुसि भएको स्थानिय तथा त्रिबेणी एफएमका स्टेशन मेनेजर कर्ण चन्दले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य खालको एक्सरे मेसिन नहुँदा स्थानियलाई निकै सास्ती हुँदै आएको थियो, अब त झन डिजिटल एकसरे मेसिन आएको छ,सबै खुसि छन् ।” नयाँ तथा पहिलो पटक आएको उक्त डिजिटल एकसरे मेसिन जडान गर्नकालागि वायोमेडिकल ईन्जीनियर चाहिने भएकाले प्रदेश सरकारले चाडै नै उक्त विषयका ईन्जीनियर पठाईरहेको जानकारी आएको जिल्ला अस्पताल डोटीले जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल डोटीमा एक पछि अर्को सेवा थपिदै आएपनि अस्पतालमा सरकारी दरन्दि अनुसारका चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई समस्या हुने गरेको छ ।
४ जना सरकारी चिकित्सकको दरबन्दि रहेको सो अस्पतालमा पछिल्लो समय गैह्र सरकारी संस्थाले खटाएका चिकित्सकका भरमा काम सञ्चालन हुँदै आएको छ । अस्पतालमा नवौ र दशौँ तहका दुईजना र मेडिकल अधिकृत दुईजना गरी कुल चार जनाको दरबन्दी भएपनि एकजना मेडिकल अधिकृत डा. भुषण मिश्र मात्रै कार्यरत रहेका छन् । उहाँले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट भएर अस्पताल चलाईरहनु भएको छ । अस्पतालमा सरकारी डाक्टर नभएपछि गैह्र सरकारी संस्था निक साईमन ईन्टरनेशनलले दुईजना चिकित्सक उपलब्ध गराएको छ । जसमा एमडिजिबी डा. गिरिश अवस्थी र एमविविएस डा. खुसिद आलम खान रहेका छन् ।
अस्पतालमा दरबन्दि अनुसारका डाक्टर नहुँदा निकै समस्या भएको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. भुषण मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालमा दरबन्दिका डाक्टर छैनन,संस्थाले खटाएका साथीहरु भएकाले केही सहज भएको छ,नत्र मलाई नै हम्मे हम्मे पथ्र्यो ।” अस्पतालमा दरबन्दि अनुसारका चिकित्सक अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा समस्या अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालमा दरबन्दि अनुसारका डाक्टरको संख्या कमी भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भने अहिले पुर्ण रहेको छ ।
त्यस्तै अस्पतालाई ५० सैयामा स्तरोन्नती गर्न पर्याप्त संरचना बनेका भएपनि अस्पतालमा अहिले सम्म जम्मा १५ सैया मात्रै स्वीकृत छ । सरकारले ५० सैयाका अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानियको आरोप छ । उनिहरु भन्छन्, “सरकारले ५० सैयाको अस्पताल बनाउने भनेको छ तर यहाँकसैले चासो देखाएन र बनेन पनि ।” भौतिक पूर्वाधार तयार भएको रिपोर्ट सहितको ५० सैयाको अस्पतालको माग सहितको फाईल स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेको वर्षौ भएपनि सरकारी निकाएबाट नै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने आदेश नआएकाले ५० सैयाको अस्पताल बनाउन नसकिएको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको बागठाँटामा रहेको उक्त क्षेत्रीय अस्पताल निर्माणका लागि खरिद गरिएको जमिन प्रयोगमा नआउदा वर्षेनी गौचरणमा परिणत हुदै आएको छ ।